Tapha calallii Waancaa Afirkaatiif taasifamu - BBC News Afaan Oromoo
Tapha calallii Waancaa Afirkaatiif taasifamu
Goodayyaa suuraa Getaanee Kabbadaa wallaansootti jira
Itoophiyaan tapha itti aanu Keeniyaa waliin Istaadiyeemii Baahir Daaritti ji'a tokoon booda Fulbaana 30 bara 2011 ALA akka taasiftu ni eegama.
Taphoota Sanbata darbe taasifameen Komoroos Kaameroon waliin Gaaboon ammoo Buruundii waliin 1-1 walqixa kan ba'an yommuu ta'u Afirkaan Kibbaa Liibiyaa waliin, Yugaandaan ammoo Taanzaaniyaa waliin 0-0 qabxii walqixa ta'e galmeessisaniiru.
Taphoota birootiin Ikkuwaatooriyaal Giiniin Sudaaniin 1-0, Naajeeriyaan Siishelsiin 3-0, yommuu mo'atan Gaambiyaan Aljeeriyaa waliin, Namiibiyaan ammoo Zaambiyaa waliin 1-1 walqixa ba'aniiru. Mozaabikiifi Giinii Bisawullen 2-2 walqixa ba'aniiru.
Waancaa Afrikaa bara 2019 Kaameruun qopheessituuf darbuudhaaf taphni calallii Sanbataafi Dilabat darbe taasifameera. Gareen Itoophiyaan keessatti argamtu kan Gaanaa, Keeniyaafi Seraaliyoon hundi isaanii qaphxii walqixa 3 qabu.
Tapha jalqqabaatiin Gaanaadhaan 5 fi 0 kan mo'atamte Itoophiyaan Tapha Sanbata darbe Istaadiyeemii Hawwaasaatti Seraaliyoon waliin taasisteen Goolii Getaanee Kabbaddaa lakkoofsiseen 1-0 injifachuu dandeesseetti.
Tapha biyyoota garee kana keessa jiran biroo taasifameen Keeniyaan Gaanaatiin 1-0 mo'atteetti.
"Abjuu badaan sun xumura argateera" - Isaayyas Jiraa
Murtaaniyaan Burkinaafaasootiin 2-0tiin, Ijjibti Niijeriin 6-0tiin akkasumas Morookoon Maalaawwiitiin 3-0tiin injifataniiru.
Taphoota dilabatarra taasifameen ammoo Maadagaaskaariifi Senegaal 2-2'n walqixa yeroo ba'an Lesoottoon Keeppi Veerdee waliin, Koongoon Zimbaabuwee waliin akkasumallee Laayibeeriyaan Dimokiraatik Koongoo waliin 1-1'n waliqixa ba'aniiru.
Tuniiziyaan dirreesheerratti Siwaaziilaandiin 2-0tiin, Koot Divowaar Ruwaandaatiin 2-1'n Maaliin Sundaan Kibbaan 3-0'n Giiniin Afirikaa Giddu-galeessaatiin 1-0tiin kan mo'atan yommuu ta'u
Tapha Toogiifi Beeniin waliin taasisanii turaniin ammoo goolii malee xumurameera.bu.
Isaayyaas Jiraa pireezidantii Federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa ta'an